Kooxda Kubadda Cagta Barcelona oo u soo baxday Finalka Koobka Horyaallada Yurub – Radio Daljir
Kooxda Kubadda Cagta Barcelona oo u soo baxday Finalka Koobka Horyaallada Yurub
Maajo 13, 2015 2:52 b 0
Arbaco, May 13, 2015 (Daljir) —Kooxda Kubadda Cagta ee Barcelona ayaa u soo baxday xalay finalka koobka horyaallada Qaaradda Yurub ee EUFA Champions League, inkastoo ciyaartii xalay dhexmaray Barcelona iyo Bayern Munich oo ahayd ciyaartii labaad oo dhex-marta labadan kooxood laga badiyay Barcelona.
Naadiga Bayern Munich oo lagu ciyaarayay garoonkeeda ayaa xalay waxay soo bandhigtay ciyaar-wanaag iyadoo kaga badisay Barcelona oo marti ahayd 3-gool iyo 2-gool, iyadoo kooxda Barcelona ay goolasha badan ku heshay labada gool ee ay ka dhalisay Bayern Munich.
Qaybtii hore ee ciyaarta aysa ciyaaryahan Benatia oo u ciyaara Bayern Munich wuxuu gool u dhaliyay kooxdiisiia daqiiqadii 7-aad, taasoo markiiba hoggaanka ciyaarta u dhiibtay Bayern Munich.
Kooxaha Barcelona ayaa waxaa iyagana gool barbarro ahaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Neymar daqiiqadii 15-aad, taasoo ciyaarta ka dhigtay barbar 1-1 ah. isagoo goolka labaad u dhaliyay kooxdiisa, kaasoo quusii ugu dambeysay gaarsiiyay kooxda Jarmalka ka dhisan.
Markii la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta waxaa goolka labaad u dhaliyay Bayern Munich ciyaaryahankooda Lewandowsky isgaoo ciyaarta ka dhigay 2-2. Waxaana ugu dambeyn 3-2 ka dhigay ciyaarta Muller.
Sidaas darteed, Bayern Munich guusheeda garoonkeeda uma suuro-gelin in ay ugu soo baxdo Finalka Koobka. Iyadoo Barcelona ay la ciyaari doonto kooxdii kasoo baxda Juventus iyo Real Madrid oo caawa isku dhaggan.
Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay in lala Hadli doono Cid kasta oo Diidan M.gobolada Dhexe
Gen Jaqanaf oo sheegay in Amniga Boosaaso Gacan bir ah lagu qabanyo (Dhegayso)